Ngiyabonga Intel | Kusuka kuLinux
pvv92 | | Aplicaciones, Izaziso
Ngizoqala ngokucacisa ukuthi lokhu kungumbono womuntu kuphela nokuthi kungahle kuhlukaniswe ngokwengeziwe. Wonke umuntu uyangazi ukuthi ngibe yisikhalazo se-amd isikhathi eside, izikhathi eziningi ngiye ngakhalaza lapha ukuthi i-radeon 4650 yami ayisebenzi kahle, ukuthi ibinezinkinga eziningi nokuthi yize ibinokushesha okuhle okungu-3d, maqondana nokusheshisa okungu-2d , Ngangihlale ngisebenza kabi kakhulu nabashayeli abaphethe, okwalungiswa kancane nabashayeli bamahhala.
Ngakho-ke kwaba ngonyaka odlule, ngoDisemba, lapho ngathatha isinqumo sokuthenga nokwakha ucezu lwekhompuyutha entsha ngcezu, lapho konke kwakusebenza khona okokuqala futhi ngingahlala ngokuthula. Ekugcineni ngigcine ngithenga i-pc nge-Intel core i5 3570k ( I-Intel hd4000) kanye ne-nvidia gt620, ukuze ngikwazi ukuhlola umehluko abantu abaningi abebengincoma nge-nvidia, abangixhasile.
Ekugcineni ngemuva kokuhlolwa nokulingwa okuningi, ngagcina ngihlala nemidwebo ye-Intel, ngimangele ngaphezu kwakho konke ngokusebenza engikuthole ku-chakra nase-kwin, kepha ngasikhathi sinye ngijabule ngokusebenza ku-Ubuntu, lapho engikwazi khona ukuhlola imidlalo efana ne-tf2, i-amnesia nabanye, ngaphandle kwenkinga nhlobo nomehluko omncane kakhulu we-fps, uma kuqhathaniswa ne-nvidia.
Ngakho-ke ngithi, ngiyabonga Intel ngawo wonke umsebenzi, ngiyabonga ngokugcina umshayeli wakho evulekile, ngiyabonga ngokuhambisana nevaapi, ngokusheshisa okuhle kwe-2d, ngokuvuselelwa kaningi, ngiyabonga ngoba ngikwazi ukusebenzisa yonke imiphumela ye-mplayer ngaphandle kokudabula nokubonga ngokuxazulula okungenani kimi, ukukhanya kwe-flash (chakra).
Ngemuva kwakho konke lokhu ngiyazibuza, ingabe kufanelekile ngempela ukuthenga ihluzo ze-nvidia ezengeziwe, nesoftware esinayo ku-Linux? Ihluzo ze-Intel hd3000 / 4000 ziwenza kahle umsebenzi wazo kulabo abangafuni ukuchitha imali eningi, ngoba abagcini nje ngokungena ku-icore, kodwa futhi naku-Intel Pentium ivy bridge.
Ihluzo ze-Intel yizona kuphela ezikuvumela ukuthi ukwazi ukusebenzisa i-distro yamahhala ngokuthula futhi ube nokusheshisa okuhle ngaphandle kokwenza izinkulungwane zama-tweaks, futhi ngokuthembeka umuzwa wokuthi konke kusebenza nje, ukuthi i-kernel ngeke yephule ihluzo zami nokuthi Nge-kernel ngayinye, ngithola ukuthuthuka okuningi okubalulekile, ayigugu.
Ngakho-ke ngingasho nje, ngiyabonga Intel futhi ngiyabonga ngalokho okunikela kuMthombo Ovulekile!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ngiyabonga Intel
IViva sis Graphics 765
usuvele unayo ukushesha kwe-3D ku-Linux?
Angicabangi ukuthi usisi noma ngabe akanakho.
lokho kwakungukubhuqa hahaha
Bengihlale nginamakhadi we-nvidia emishini yami ye-linux futhi angikaze ngibe nenkinga, yize ngihlala ngifaka abashayeli ngokuzilanda ngqo kusuka ku-nvidia.
"Ingabe kufanelekile ngempela ukuthenga ihluzo ezengeziwe ze-nvidia, nesoftware esinayo ku-Linux?"
Uma kufanele i-nVidia enhle (abashayeli abaphathelene) uma usebenzisa isibonelo iBlender ngokunikezwa yi-GPU (Ngekhithi yamathuluzi e-CUDA). Kuyafana nakwezinye izinhlelo ezisizakala ekusheshisweni kwe-GPU. Futhi ngicabanga ukuthi uma kukhulunywa ngokusebenza kwemidlalo okufuneka kakhulu, i-Intel isalele emuva kakhulu. I-Intel kwi-hardware yezithombe kusekude ekubambeni umncintiswano (futhi ngangijabule ngamahemuhemu lapho i-Intel izothenga khona i-nVidia). Ngisho ne-AMD APU enhle kakhulu idlula okuhle kwe-Intel ku-3dMark ngaphezu kokuphindwe kabili.
Kepha nginikela ngokuphelele i-Intel ekugcineni umshayeli wamahhala osezingeni. Ngisho ne-CPU yami elandelayo izoba yi-i5-3570k noma i7-3770k, futhi ngithemba ukuthi ngizoba nokuhlangenwe nakho okuhle komsebenzisi uma kukhulunywa ngemidwebo nokubhala.
I-PD icishe ibe yi-offtopic: Ngabe ukwazile ukweqa ngaphezulu i-3570k ku-GNU / Linux, noma ngabe ibekwe umkhawulo we-kernel?
Ngikubambe ngokweqile futhi angibanga nezinkinga oO
Ukuqinisekisa nje, ingabe uke wakuhlola ukuthi imakrofoni isebenza ngejubane eleqile ku-GNU / Linux?
Ngoba into eyodwa ukuthi ekucushweni kwe-BIOS sikweqile ngokweqile, kepha enye into ukuthi i-GNU / Linux ivumela leyo hardware ukuthi isebenze ngejubane eliphakeme kunokuba "ingafunda" ngokusebenza okuphephile.
Njengamanje kulokhu engikubonayo, kusebenza ku-4,2 Ghz, ngakho-ke ngicabanga ukuthi konke kulungile 😛
Kulungile, ngihlala ngizolile futhi ngichitha amadola ambalwa ngaphezulu ku-CPU eyeqisa ngokweqile yochungechunge lwe- «K» 😉
Nginokubhuka kwami ​​mayelana nokusebenzisa isichasiselo esinjenge-CUDA okunobunikazi futhi esingasetshenziswa kuphela yi-NVIDIA, ngincamela i-Opencl kude
Yebo, ngihlala ngithanda ukucaciswa okuvulekile kanye / noma ukwenziwa. Kepha funda ukuthi "ngithanda" ngokucophelela. Uma ku-blender ne-CUDA okwamanje ukunikezwa ngesikhathi kusizakala kakhulu nge-OpenCL, ngoba ngisebenzisa i-CUDA.
Noma kunjalo ngibheja i-OpenCL futhi lezo zikhathi zizofinyezwa ngokusetshenziswa okungcono.
Ngendlela, ngokwazi kwami ​​ayikho imidlalo edingeka kakhulu kwiLinux, futhi uma beza, uma i-intel ifuna ukuthi ingagijima, mina kumawindi naku-mac, bengidlala ngo-1920 x 1080, zombili i-ops2 emnyama no-1 (lena ku-mac) , eBatman arkam city, enemininingwane phakathi, futhi ngihlale njalo kuma-fps angama-30, futhi uma uyivula kancane, ufinyelela kuma-40 nakubasebenzisi abangama-90% abangewona ama-gamers, abadlala ngezikhathi ezithile, kuza kubo ukuyeka. Kufanele nje bathuthukise itafula le-3d ku-Linux.
Angiyena umdlali, ngithembekile kuwe. Uma ngike ngafaka imidlalo, bekulokhu kuvivinywa i-hardware entsha kuphela, kepha angikaze ngiyidlale.
Kepha angazi ukuthi kukhona yini owaziyo "umdlalo". Bafuna umdlalo wakamuva utholakale ku-FullHD ngesethingi ngemininingwane ye-ultra nakuma-fps amahle. Yebo, iqiniso namuhla ukuthi i-Intel ayinayo i-Hardware enganelisa lezo zici.
Futhi angazi ukuthi njengamanje ku-GNU / Linux kunemidlalo edinga okungaka, kepha nginesiqiniseko sokuthi ngokufika kukaSteam (ngendlela, imidlalo ephathelene), kuzoba khona.
Ngingumdlali we-xD, futhi lapho ngifuna ukudlala kumawindi ku-ultra hd, ngithatha i-radeon 7870 yami ngiyifake, kepha imvamisa ngine-intel eningi, idla kancane futhi konke kuhamba kahle ^^. Imidlalo yama-Valve akuyona imidlalo edinga okuningi, ayikho.
Idem. Bekufanele usho kuphela ukuthi ngokuhlangana nokusebenza nokusebenza kokuzinza ekukhishweni ngakunye, banokusekelwa okungcono kakhulu kunabalingani babo beWindows. Yize ngiyithanda i-AMD, inqobo nje uma ngizoqhubeka nokusebenzisa iLinux nsuku zonke, ngeke ngicabange kabili bese ngikhetha i-Intel.
Isihloko esiyigugu! 😀
Ihlaya, kepha yize ngingenazo izinkinga nge-Integrated yami kukhona okungcono.
Hhayi-ke, ngiyabonga CHA.
Lezi zinkampani azenzi lutho ukwenza umusa, zibona ithuba emakethe edelelwa yi-AMD futhi inomfutho omncane wakwaNvidia.
Kepha akungabazeki ukuthi ukuzibophezela kwe-Intel kwi-GNU kusifanela sonke.
Ngethemba ukuthi umbono wabo omuhle uzokhokha, ngoba manje njengoba uNvidia ebukeka kahle kuSteam kwelinye lama-distros athandwa kakhulu kunganikeza ikhekhe ukuluma okukhulu kunakho konke.
Ake ngibheke ukuthi ngiyaqonda yini. Ngakho-ke noma ngabe wenza umsebenzi omuhle futhi uwenze nge-openource software ... "ngiyabonga kodwa cha"? ... ngiqonde ukuthi, uma bengakwenzi ngokuzidela nangobuntu, umsebenzi awubalwa, akunjalo? ngoba yilokho okushiwo.
Ngokwazi kwami, ayikho inkampani eyenza umusa, bonke bafuna ucezu lwabo lwe-pizza futhi ngiyaluqonda, noma nokuthi umsebenzi wami nemikhiqizo yami yenzelwe ukusiza isintu ... zenzelwe ukuthola imali futhi ngalokho zithuthukisa izinga abantu ku-X factor.
Umqondo ebengifuna ukuwuveza akukhona ukuthi akawamukeli umsebenzi wakhe noma njengesipho noma ukuthi akawubongi.
Kepha kusuka kulokho kuye ekumkhonzeni ngokwenza lokho okusethwe ngumbono wakhe webhizinisi, kunendlela ende okufanele yenziwe.
Ngendlela efanayo angikwazi ukubonga uhulumeni wedolobha lami ngokulungisa izibani zomphakathi emgwaqweni engihlala kuwo, woza, noma kungangisiza kangakanani, lowo ngumsebenzi wabo.
Lokhu kubongwa kuya kubo bonke labo abenza okuthile ukuze kuzuze bonke abantu ngaphandle kwesibopho nangaphandle kwemiholo njengokuphela.
Nge-Intel ukwazisa kwami ​​ngombono wabo nokusetshenziswa kwemikhiqizo yabo.
Umehluko ukuthi inkampani ibaluleke kakhulu ukunakekela izintshisekelo zayo
Ngicabanga ukuthi kuyisenzo esihle, ukusho ukuthi ngiyabonga ngoba ngokwenqubo ufaka isandla emphakathini onobunzima obuningi
Kepha ngiyaliqonda iphuzu lakho
Bayizinkampani, benza abakwenzayo, abalindele ukubonga kepha ithikithi, kungani kufanele sibabonge?
Uff, ekugcineni kuphawulwe ngezinqubo.
Wamukelekile, ngiyabonga ngokungithemba kwakho 😉
Hahahahah, i-xD enhle
Ngine-laptop yami ene-Intel chip, lena engiyisebenzisa manje, futhi iqiniso ukuthi i-pc yami eneNvidia Privative isebenza kangcono kakhulu nge-gt 440 yami, ku-core 2 duo 3..2Ghz, isebenza kangcono kakhulu kune-laptop i3 2310M yami ene-intel driver , yize iqiniso i-intel inokuhambisana okuhle kakhulu.
Ndoda, i-gt440 ayisona isiphetho esiphansi! Kufana nokusho ukuthi ilaptop ene-radeon 5670 isebenza kangcono kune-Intel ... by the way, futhi leyo Intel inemidwebo ye-hd3000 ..., engenamandla njenge-4000
U-nvidia usanda kukhipha ubuchwepheshe obusha obubizwa ngokuthi yi-optimus, okuthi ekhadini levidiyo bufike ku-2: i-Intel ne-nvidia (konke ngaphakathi kwe-nvidia). Ku windows lapho uhlelo lokusebenza lungadingi ihluzo eziningi kangaka, lisebenzisa i-Intel, futhi lapho uhlelo oludinga ihluzo eziningi luvulwa, lolo hlelo lusebenzisa i-nvidia. Lokhu kwenzelwa ama-laptops, ngoba wonga amandla amaningi ngokungasebenzisi i-nvidia njalo exhunywe 😉 ye-linux lawa makhadi awasasebenzi kahle 🙁 iphrojekthi ebizwa nge-bumblebee yazalwa ezama ukwenza lokhu, futhi empeleni iyasebenza vele! kodwa hhayi okuzenzakalelayo; kufanele uvule izinhlelo uthi ukuyivula nge-Intel noma i-nvidia (:
ungabheka okuningi lapha: https://fedoraproject.org/wiki/Bumblebee
Bengihlala ngisebenzisa i-Intel .. mhlawumbe yingakho ngazi ngalokhu kuzinza okhuluma ngakho ..
I-Intel vs nVidia.
Nginokubili ukuqhathanisa, futhi yize ihluzo le-Intel LIHLE KAKHULU kubashayeli babo, uma uliqhathanisa ne-gt620, esezingeni eliphansi, i-Intel ngokusobala iyathandeka ngoba bobabili benza ukusebenza okufanayo, kepha benabashayeli bamahhala abangcono , usuvele uyazi ukuthi iyiphi oyikhethayo.
Into ehlukile uma uyiqhathanisa ne-GPU esezingeni eliphakeme.
Ngaphezu kwalokho, kuya nge-PC onayo, ama-GPU azoshesha (izinto ezinjengememori ye-DDR5 nalokho) kubashayeli abanobunikazi abaningi okufanele bafakwe (Futhi sibonga okuhle ukuthi lezo ze-nVidia azinikeli izinkinga eziningi njengalezo ze-AMD).
U-Ami i-g620 ubengibulala nge-compiz iqiniso futhi angikwazi ukusebenzisa i-vdpau kwimodi yewindi, kuphela kusikrini esigcwele, kepha yonke i-pc izokwehlisa ijubane: bekucishe kuhlonipheke ...
Ngine-nvidia gt520 ku-OS engama-64-bit debian OS futhi ngingasho nokuthi isebenza ngokufana nakumawindows anezishayeli zokuphathelene ezitholakala kumakhosombe e-debian.
Ngicabanga ukuthi awukwazi ukuqhathanisa amandla emidwebo ye-nvidia ne-Intel, nayo eza ngaphakathi kwe-microprocessor uqobo.
Ngingathanda ukwazi ukuthi kunjani okuhlangenwe nakho kwe-linux ye-amd nemidwebo ethi ati ku-micro, okuvela kulokho engikuqondayo, ngokubeka ikhadi lemidwebo ye-ati esikhundleni sokukhansela bayaphelelisana
Empeleni i-gt520 iku-600, i-610, ngakho-ke impofu impela. futhi kunoma iluphi uphawu lokulinganisa uzobona ukuthi kungemuva kwe-intel hd4000
Yebo, usho ihluzo ze-APU + "discrete". Nginethimba nje "le-htpc" engingakaqedi ukwakha kulo, lapho ngihlose ukuvivinya okushoyo nge-Apu Trinty A6 + iRadeon HD6670 ... nginombuzo ofana nowakho.
Njengoba ngingeyena umuntu wokudlala imidlalo esindayo, i-Intel ingifanela kahle
Bengihlala ngisebenzisa i-AMD, ngoba ngiyathanda ukudlala imidlalo. Angizalwanga eLinux, kancane kancane ngizama ukusebenzisa amathuluzi womthombo ovulekile enza okufanayo nalawo aphathelene neWindows.
Esikhathini esingengakanani esidlule ngafaka iKubuntu 12.10 x64 ngafaka nabashayeli be-AMD, ngabafundisi abavela kwi-wiki engafanele yabo. Konke kungilungele, ngikwazi ngokuthula ngidlale umthombo wesiteleka esiphikisayo, ama-fps angama-150-300 nokushisa konke kuhle (56 ° C)
Kancane kancane bayabona imakethe ebikhula eLinux, futhi abashayeli bazothuthuka, noma ngicabanga kanjalo.
I-intel embi kakhulu ayiphumi nebhodi le-accelerator (ephelele), elisebenza ngokufana ne-radeon 7950 noma elingcono, noma lihlinzeka ngama-chip chips abahlanganisi abahle, njenge-msi noma i-gigabyte
Ungakukholwa, sizobona ukuthi ama-intel microprocessors amasha, ama-hanswells, athembisa kanjani okuningi ngalokho abakushoyo.
Ngiyavuma, ngalezi zikhathi lapho kunentshisekelo engaka ku-GNU / Linux, izinto ezinganquma onqobayo kuzoba ukuthuthukiswa kwehardware yi-Intel ukuze ikwazi ukuba nemidwebo engancintisana nokuphela okuphezulu kweNvidia, (futhi ngaso sonke isikhathi kuza umugqa omusha wamaprosesa ubonakala uthuthuka ngokweqa)) nokwenza ngcono noma ukukhululwa kwabashayeli nguNvidia.
Inkampani ebheja kakhulu kulezi zindawo izoba ngumnqobi ongenakuphikiswa, ngoba kulo mhlaba wesoftware yamahhala abantu benza izinqumo ezinolwazi oluningi lapho bethenga imishini yabo hhayi ukukhangisa kuphela.
Abasoze benza ihluzo ezinamandla anjalo, ngoba iprosesa izobiza ama-euro angama-600 xD, ama-200 +400 wemidwebo, leyo akuyona umkhakha wabasebenzisi u-Intel ayifunayo, i-Intel ifuna lowo msebenzisi ongadingi mfanekiso onamandla we-hyper.
ngezinga izinto ezihamba ngalo cpz ngonyaka ongu-1 ayinamandla amakhulu uma iqhathaniswa nezinye, futhi isazoba yindlela enhle yokuthenga, uma ubufuna, ubungaba khona abathengi abaningi abanentshisekelo, ngaphezulu uma bekhululekile ngokuphelele, kepha uma intengo ingaba okuthile Kubaluleke kakhulu, ikepisi kufanele libe ngama-euro angama-120, ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi kunoma yiziphi izingxenye zalo. mahhala nokusebenza okuhle. zingaki izinto ezingaphuma entweni enjalo.
Kuyiqiniso, kepha sekukhona abantu abakhokha amanani afanayo ngenhlanganisela ye-Intel CPU + Nvidia GPU. Ngokuqinisekile ngeke bahlale ukukhokha imali efanayo uma befaka umshayeli we-Intel omuhle wamahhala.
Konke kuncike kwi-hardware i-Intel enayo ngokuzayo.
Ngingakujabulela ukuthenga ikhadi levidiyo le-Intel elizinikele
Ngigijima ngokusebenza okungenani ama-7850 http://www.gpureview.com/Radeon-HD-7850-card-678.html
Usuku olwenzekayo!, I-Intel i5, ngeke ibize ama-euro angama-200, kepha ama-300….
Imibono yakho iyathakazelisa kakhulu, futhi impela yindatshana ezoletha umsila 😀
Nginombuzo owodwa kuphela kumbhali walokhu okuthunyelwe:
Uma uthi "kuyahlukaniswa" usho ukuthi "kwabelwane ngakho"? Ngoba igama elinjalo alikho ngeSpanishi, kuphela ngesi-Italian (futhi lokho kwenzeka, alinayo i-'i '), okungenani endaweni yonke yethu.
Ngingowase-Italy, la maphutha kungenzeka ngokuphelele ...
Uqinisile impela. Ngibe nemidwebo ye-Intel kusukela ngo-2007, futhi kumnandi. Inenkumbulo encane, futhi ishibhile kakhulu, kepha yimidlalo embalwa ebiyimbi kimi lapho ngisebenzisa windows, futhi angikaze ngibe nezinkinga ngokusheshisa ihluzo nganoma yiluphi uhlelo lokusebenza. Akunabashayeli, noma amandla noma yini, ngobuqotho, i-Intel, ikusebenzile futhi ngethemba lokuthi manje ku-2014 nesizukulwane esilandelayo sabaprosesa nemidwebo, ukuthi konke kuyaqhubeka njengakuqala, kepha kungcono.
Umagazini we-TuxInfo # 56 uyatholakala
I-KDE: wamukelekile kudeskithophu ye-semantic (ingxenye 1)